Telugu တွင်ရှိသောစာလုံးပါသောအမှားတစ်ခုသည် iOS တွင်မမျှော်လင့်သောပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
တီလော့စကား၌စာလုံးပါသောအမှားသည် iOS တွင်မမျှော်လင့်သောပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမှာက၎င်းသည် Apple ကိုယ်နှိုက်ကအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သော bug တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးတီလူးဘာသာစကားနှင့်၎င်းမှပေါ်လွင်သောအက္ခရာများကြောင့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သီအိုရီအရ၎င်းသည် iOS အသုံးပြုသူအများစုအပေါ်မသက်ရောက်သင့်ပါ။ ဤကိစ္စတွင် bug တစ်ခုရှိနေကြောင်းအတည်ပြုခြင်းအပြင် Apple ကပြောကြားခဲ့သည် ၎င်းကိုအောက်ပါ operating system iOS 11.3 တွင်ဖြေရှင်းသည်.
အမှန်မှာ iOS တွင်မကြာခဏအလားတူ bug များပေါ်လာသည်ကိုသတိရသင့်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ iOS 11.1.2 ရှိ iPhone နှင့် iPad တို့တွင်ပြcrနာဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ Apple သည်ထိုအခါသမယတွင်ဗားရှင်း 11.2 အသစ်ကိုလျင်မြန်စွာစတင်ခဲ့ရသည်။ ပြtheနာကိုဖြေရှင်းဖို့။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် bug သည်အလွန်လေးနက်ပြီးရိုးရှင်းစွာမဟုတ်ပါ လျှောက်လွှာကိုပြန်စပါမည်.
အီတလီဝက်ဘ် မိုဘိုင်းကမ္ဘာ ဒီပြသနာကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြသဖို့တာဝန်ရှိပေမယ့် iPhone ဒါမှမဟုတ် iPad ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာလုံးကို iOS device ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါသင်ကိုယ်တိုင်အဲဒီ bug ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ application ကို restart လုပ်ပါဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်တွစ်တာတွင်ပင် -
ဒီ Telugu ဇာတ်ကောင်ကိုကွန်ပျူတာမှအခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ထံပို့ခြင်းပင်လျှင် iPhone သည်လက်ခံရရှိပြီးနောက်သူ့ဟာသူပြန်လည်ဖြစ်သွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုအသုံးပြုသောအရာနှင့်မရင်ဆိုင်ရပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အသုံးပြုမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည့်ဝေးလံခေါင်သီသော bug များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်ကဒီနိမိတ်လက္ခဏာကိုရှာပြီးထုတ်လုပ်ရန်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် "အတင်း" လုပ်ရမယ်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, iOS 11.3 ပြသခြင်းအတွက် beta များသည် developer များစွာနှင့်ရှင်းပြပြီးဖြစ်သည် - အစပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းမှတ်ချက်ပေးပါ - ဤဗားရှင်းအသစ်သည်ဤသင်္ကေတနှင့်ပြproblemနာမရှိတော့သောကြောင့်အမှားပြင်ဆင်ချက်များဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုဒီသင်္ကေတကိုပို့ပြီးသင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ပြန်လည်စတင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်တာတစ်ခုက အမြန်ဖြစ်ခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » တီလော့စကား၌စာလုံးပါသောအမှားသည် iOS တွင်မမျှော်လင့်သောပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မှာ Iphone 6s ရှိပြီးသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဤသင်္ကေတကိုပို့ပေးပါ အိုင်ဖုန်းဟာချက်ချင်းပဲရပ်တန့်သွားပြီးသူ့ဟာသူပြန်လည်စတင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လုံးဝမဖွင့်ပေမယ့်အက်ပဲလိုဂိုနဲ့မျက်နှာပြင်ကကွက်လပ်ဖြစ်နေဆဲပဲ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲ ??? ကျေးဇူးပြုပြီးအရေးကြီးပါတယ်
သင် Paula မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ရမယ်။
မကြာမီ Cydia သည် CoolStar ၏ iOS 11 jailbreak သို့ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်
HomePod ၏ကုန်ကျငွေသည် ၂၁၆ ဒေါ်လာအထိရှိသည်